မတူပီမြို့တွင် အရက်သေစာ ပပျောက်ရေး အလွှာပေါင်းစုံ က လုပ်ဆောင် |
« ဟားခါးမြို့တွင် ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာဖြင့် ဆိုင်ကယ်လိုင် စင် ပြု လုပ်ပေး
ချင်းပြည်နယ် အုပ်စုစာရေးများ အဆင်သင့် ဖြစ်ရန် ပြည်နယ် ဥက္ကဌက ညွန်ကြား »
မတူပီမြို့တွင် အရက်သေစာ ပပျောက်ရေး အလွှာပေါင်းစုံ က လုပ်ဆောင်
၂၄ ဇွန်လ ၂၀၁၀၊ ချင်းပြည်နယ်၏ ဒုတိယမြို.တော် မတူပီမြို့ပေါ်ရှိ ဘာသာရေး၊လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖ များ ပူးပေါင်းပြီး ဒေသတွင်း အရက် သေစာပပျောက်ရေးအတွက် အဘက်ဘက် မှလက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သိရ သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလကတည်းကစ၍ မတူပီမြို.ပေါ်ရှိ လိုင်စင်ရ အရက်ရာင်းဝယ်ဖောက်ကား နေ သူများ၏ လိုင်စင်များကို ၄င်းတို.က ပြန်လည်ဝယ်ယူပြီး အရက်ချက်၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်မှုများ လုပ်ဆောင် လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“အရက်သေစာပပျောက်ရေးအနေနဲ.ဆိုပြီး မတူပီမြို.ပေါ်က လိုင်စင်ရအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ သူတို့လိုင်စင်ကို ၀ယ်ရတယ်၊ ဒီလိုဝယ်လိုက်တော့ သူတို.ကလိုင်စင် မရှိတော့ အရက်ရောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူး” ဟု မတူပီမြို့ပေါ်နေ ကျမ်းစာကျောင်းသား တဦးက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို. အရက်သေစာရောင်းချမှုများပိတ်ပင်လာရခြင်းမှာ လူငယ်များအနေဖြင့် အရက်ပိုမို သောက်သုံး လာကြသည့် အပြင် အရက်မှူးယစ်ပြီး လင်မယားအကြား စကားများခြင်း၊ အိမ် ထောင်ကွဲခြင်းများအထိ ဖြစ်ပွားလာနေသည့် အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါကျောင်း သားကဆက်ပြောသည်။
မတူပီမြို့ပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဘုံဆိုင်အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက လိုင်စင်ရ ဘုံဆိုင် သုံးဆိုင်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ အဓိကအားဖြင့် ပြည်တွင်းထုတ် အိုဘီ အရက်များကို ပြည်မ ဘက်မှ သယ်ယူလာပြီး ရောင်းချကြသည်ဟုသိရသည်။
“ပုဂ္ဂလိက ဘုံဆိုင်ဖွင့်တဲ့ လိင်မယား ကွဲသွားကြတယ်၊ အဲဒါတွေက အရက် ဆိုးကျိုးကြောင့်ပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ယခု လို အရက်လျှော့ချ ရေးကို ဖိဖိစီးစီးလုပ်လာ ကြတာ ဖြစ်တယ် ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အရက်တိုက်ဖျက်သည့်အနေဖြင့် မတူပီမြို့အတွင်းသို. ၀င်လာကြသည့် ကား နှင့် ခရီးသည် များကို အထက်ပါအသင်း အဖွဲ.များက မြို့ အ၀င်တွင် စစ်ဆေးလျက် ရှိသည်ဟုသိရသည်။ သို့သော်လည်း တပ်မတော်သားများကိုမူ စစ်ဆေးခြင်း မပြုကြောင်းသိရသည်။
“ပြည်မက ၀င်လာတဲ့ ခရီးသည်မှန်သမျှ စစ်ဆေးတယ်၊ တပ်မတော်သားတွေက လွဲလို့ ပေါနော့်၊ ခရီးသည်တွေ လည်း ကျေကျေ နပ်နပ်နဲ. အစစ်ခံပါတယ်၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း အရက်တိုက် ဖျက်တာကို အား ပေးကြတယ်” ဟု၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ထိုသို့အရက်သေစာတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပါတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကလည်း အားပေးကြောင်း သိရသော်လည်း တပ်မတော်သား များကိုမူ ဘာမှမစစ်ဆေးခွင့် မရှိကြောင်း သိရသည်၊
အလားတူ ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့တွင်လည်း လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ကတည်းက အရက်သေစာ တိုက်ဖျက်ရေးကို ဘာသာရေးအသင်း၊ လူငယ်အသင်းများက လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသည်၊